Ugboro abụọ enweta na akara ngosi nke TunesGo ugbu na PC gị na-emeghe software na a n'ụlọ dị ka n'okpuru ga-apụta.
Ugbu a gị Android ngwaọrụ site na nke ị chọrọ nyefee music na jikọọ na ya na PC. Jikọọ otu njedebe nke USB na Android ekwentị na ndị ọzọ na ndị USB n'ọdụ ụgbọ mmiri nke gị PC. Ozugbo ejikọrọ, a na ihuenyo dị ka n'okpuru ga-apụta na-egosi gị Android ekwentị n'okpuru Ngwaọrụ nhọrọ nke TunesGo ugbu na aka-ekpe-n'akụkụ. (Nseta ihuenyo egosi SamsingGT-I9300 dị ka ejikọrọ Android ekwentị)
Ọ dịghị-akwaga "Music" nhọrọ ugbu n'okpuru Ngwaọrụ na aka-ekpe-n'akụkụ ịhụ tracks nke dị na gị android ngwaọrụ.
Site nyere ndepụta nke songs, họrọ ndị nke na-ịchọrọ ị nyefee iTunes. (Na n'okpuru nyere ihuenyo 3 songs na-ahọrọ).
Mgbe na-ahọpụta ndị songs na-aga "Export Iji" nhọrọ ugbu n'elu nke TunesGo homepage.
Mgbe na-ahọpụta "Export Iji" a dobe ala menu ga-apụta si ebe mkpa ka ị họrọ nhọrọ nke "Mbupụ na iTunes ọbá akwụkwọ"
Na nke a, họrọ songs ga-agafere ma ị nwere ike ego otu n'okpuru Music nhọrọ nke gị iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Ọzọ: Android ka PC / Mac